fanabeazana Archives - Page 3 sur 4 - Lemur Conservation Network
You are here: Home › fanabeazana
Tag Archives | fanabeazana
Ny mombamomba ny tetikasa Ny Conservation International -Madagascar dia efa niasa an-taonany maro momba ny fiarovana ireo zava manan’aina, biby sy zava-maniry teto Madagasikara sy ireo nosy manodidina, ary nihitatra teo amin’ny lafiny fanantsarana ny velon-tena ny olombelona izany taty aoriana. Miara-miasa akaiky amin’ireo olon-tsotra, fikambanana, VOI, sekoly, ivo-toeram-pikarohana, Oniversite, ary Ministera maro izahay arakaraka ny […]
By Seheno Corduant on août 31, 2019 in Bilaogy
Nianatra momban’ny jeografia teny amin’ny ambaratonga ambony teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo i Holi tao amin’ny Sampam-pianarana momba ny Haisoratra sy ny siansa mahaolona ary nahazo ny mari-pahaizana « master » tamin’ny sokajy tontolo iainana sy ny siansa momban’ny tany « Parcours milieux naturels et sciences de la terre » tamin’ny taona 2016. Tsy nanaraka fiofanana momban’ny fampianarana momban’ny tontolo iainana […]
Iray volan’ny Mpikambana LCN : Ny mention ADD-Oniversiten’Antananarivo
By Seheno Corduant on juillet 1, 2019 in Bilaogy
Mba zarao aminay ny tantara sy ny mombamomban’ny mention ADD Ny sampam-pampianarana Anthropobiolojia sy ny Fampandrosoana Lovain-jafy (Mention Anthropobiologie et Developpement Durable-MADD) dia rantsana iray teraka tao anatin`ny Departmenta Paleontolojia Anthropolojia Biolojika (Departement de Paleontologie et d`Anthropologie Biologique). Io departemanta io dia teraka tao anatin`ny Fakiolte Siansa – Oniversite Antananarivo ny taona 1975. Ny Departemanta […]
By Seheno Corduant on mai 15, 2019 in Bilaogy
Teny Fampidirana Ny faritra tsirairay manerana an’i Madagasikara dia samy manana ny toetr’andro sy toe-tany misy ao aminy. Ireo zava-misy ireo no isan’ny mihazona ny fahasamihafan’ireo zavamanaina, biby sy zavamaniry, izay mampiavaka an’i Madagasikara amin’izao tontolo izao. Anisan’ny antony isafidianan’ny zavamananaina iray ny toeram-ponenany ireo fepetra rehetra mandrafitra ny toetr’andro sy ny toe-tany. Izany rehetra […]
By Seheno Corduant on mars 25, 2019 in Bilaogy
Fantatrao ve fa nisy varika lehibe tahaka ny rajako teto amintsika fahiny? Amin’izao fotoana izao dia anisan’ny olana sedrain’ny firenena rehetra maneran-tany ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Hita izany matetika amin’ny firongatry ny aretina maro samihafa, ny fihenan’ny vokatra avy amin’ny fambolena ary ny fitomboan’ny loza voajanahary. Ny ankamaroan’ny anton’ireo anefa dia fantatra fa vokatry ny […]
By Seheno Corduant on janvier 14, 2019 in Bilaogy
Nahoana hoy ianao no zava-dehibe ny fanabeazana eo amin’ny fiarovana ireo varika? Nisy ny tarehy marika nomen’ireo mpikaroka farany momba ny tahan’ny fahapotehin’ny ala eto Madagasikara. Efa ho ny valo-polo isa jato na 80 % ny ala eto Madagasikara efa potika tanteraka. Ary tamin’ny taona 2017 fotsiny dia maherin’ny iray alina sy dimy hetsy na […]
« Ity lahatsoratra ity dia dika tenin’ilay bilaogy nosoratan’i Denise sy Marc Dragiewicz izay mpiara-mitantana ny famokarana ilay sarimehitsika/oronantsary iray izay notanterahina tamin’ny faritr’i Andasibe iny. Izy ity moa izany dia mijery manokana ihany koa ireo ezaka izay ataon’ny mponina eny ifotony manoloana ny fiarovana ireo gidro/varika sy ny ala. » Roso ny dia- Ela niandrasana, fa tonga ihany […]
By Fabiola Holiniaina Kjeldgaard on août 10, 2016 in Bilaogy
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Talata , faha 12 Jolay lasa teo ilay tetik’asa Pet Lemur Survey, izay notanterahana tao amin’ny Trano Koltoraly Amerikanina tetsy Tanjombato nanomboka tamin’ny 2 ora tolak’andro. « Harenan’i Madagasikarana ny Giro/Varika », io no teny faneva izay nosaloran’ity foto-drafitr’asa ity izay firaha- miasan’ ireo mpikaroka manokana avy ao amin’ny « Utah University » sy […]